इृटहरी/ यो वर्ष नेपाली चलचित्र उध्योगका लागि औसत रह्यो । ‘घामपानी’, ‘लभ लभ लभ’ र ‘राधे’को प्रदर्शनसँगै सुरु भएको वर्ष २०७४ ‘लिलिबिली’ र ‘नेप्टे’को प्रदर्शनसँगै सकिँदैछ । यो वर्ष करिब ९० नेपाली चलचित्र प्रदर्शन भए ।
‘शत्रुगते’ यो वर्ष सवैभन्दा ठुलो व्यापार गर्ने सफल चलचित्र बन्यो । वर्षको अन्त्यमा ९ चैतबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्रमा पल शाह, आँचल शर्मा, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, प्रियङ्का कार्की लगायतका कलाकारको दमदार अभिनय रहेको छ चलचित्र अहिले पनि प्रदर्शनमै छ । चलचित्रमा भएको ‘पिरतीको बर्को’ गीतलाई चोरीको आरोपसमेत लागेको छ ।
वर्षकै सबैभन्दा बढी चर्चित र व्यावसायिक सफल चलचित्र भयोे । ‘प्रेम गीत’को सिक्वेलको रूपमा चलचित्रलाई मानिएको थियो । चलचित्रमा युवास्टार प्रदीप खड्का र अश्लेषा ठकुरी मुख्य भूमिकामा देखिएका थिए । यो चलचित्रसँगै यसका अभिनेता प्रदीप सबैभन्दा महँगो अभिनेता भएर सिने नगरीमा उदाए ।
वर्षकै चर्चित चलचित्र बन्यो ‘कृ’ । अभिनेता अनमोल केसी रहेको कृ २६ माघमा प्रदर्शनमा आएको थियो । चलचित्रमा अनमोल केसी, अदिती बुढाथोकी मुख्य भुमिकामा रहेका थिए ।
भुवन केसी र सुवास गिरी निर्माता रहेको चलचित्र गीत चोरीको विषयलाई लिएर बिवादसँगै चर्चामा रह्यो । करिव दुई करोड लगानी भनिएको चलचित्रले जेनतेन लगानी उठाएको अनुमान गरीन्छ ।
करिब २ दशक अभिनयमा बिताएकी झरनाको निर्देशनमा डेब्य चलचित्र गीत सङ्गीतका कारणले पनि चर्चामा रह्यो । यसै चलचित्रबाट अभिनयमा डेब्यु गरेका सलिमान बानियाँ समेत हिट भए । धेरै फिल्ममा अभिनय गरेका अभिनेता सलोन बस्नेतले यो चलचित्र बाट सबैभन्दा बढी चर्चा पाए । ‘उकालीमा जाँदा जाँदै’, ‘किनिदेऊ न साइला दाइ’ लगायत केही हिट गीत रहेको यो चलचित्र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसमेत रहेकी कारणले पनि चर्चा पायो । साम्राज्ञीको यो दोस्रो चलचित्र थियो ।सुनिलकुमार थापाको निर्माणमा तयार भएको चलचित्र १६ भदौमा प्रदर्शनमा आएको थियो ।
असोज ११ मा रिलिज भएको यो चलचित्र नै वर्षको सफल अनि व्यवसायीक मुनाफा कमाउनेमा दर्ज भयो । चलचित्रको चर्चित गीत ‘ए दाजु नसमाउ नाडीमा’ चोरी कान्डमा चलचित्र मुछियो पनि । ‘छक्का पन्जा’को सिक्वेलको रूपमा निर्माण भएको यो चलचित्रले करिब १२ करोड माथिको व्यापार गरेको यो चलचित्रले केही हलमा भने ५१औं र ७५औं दिन प्रदर्शनको रेकड समेत बनायो ।
‘भन्छु आज’ बोलको सर्वा्धिक चर्चित गीत रहेको यो चलचित्रले व्यावसायिक लाभ भने राम्रो लिन सकेन । जिनतिन लगानी सुरक्षित मात्र गरेको बताईन्छ । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ शीर्ष गीतले समेत चर्चा पाएको थियो । पल शाह र पूजा शर्मा मुख्य भूमिकामा थिए ।
‘काले दाइ काले दाइ’ भन्ने चर्चित गीत रहेको चलचित्र ‘पर्व’ले व्यावसायिक मुनाफा भने कमाउन सकेन । १२ जेठमा रिलिज भएको चलचित्रको लगानीकर्ता सुवास गिरी र निकिता पौडेल रहेका थिए । चलचित्रमा नम्रता श्रेष्ठ, कोशिश क्षेत्री, माला लिम्बु, जेविका कार्कीलगायत थिए ।
सञ्चारकर्मी दीपेन्द्र लामाको निर्देशन रहेको ‘घामपानी’ पनि चर्चामा रह्यो । मिडीया क्षेत्रमा सकृय लामाको चलचित्र भएकाले पनि यो चलचित्रले मिडीयामा राम्रो कभरेज पायो । अभिनेत्री केकी अधिकारी र दयाहाङ राई चलचित्रमा मुख्य भूमिकामा थिए । चलचित्र समीक्षक तथा दर्शकले दुवैले मन पराएका थिए । तर चलचित्रले बम्पर ब्यवसाय भने गर्न सकेन । जिनतिन लगानी भने सुरक्षा गर्न सफल भएको मानिन्छ ।
‘पर्ख पर्ख मायालु’ बोलको गीतका कारण वर्षभरी चर्चामा रहेको चलचित्रमा पुष्प खड्का, शिल्पा पोखरेल र पृथ्वीराज प्रसाईंको मुख्य भूमिका रहेको थियो । चलचित्रमा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको समेत अभिनय थियो । दर्शक र समीक्षकले समेत मन पराएको चलचित्रले उत्कृष्ट व्यापार पनि गर्यो ।
गीतका कारण चार्चत भएको चलचित्र कात्तिक ९ मा प्रदर्शनमा आएको थियो । अभिनेता रमेश उप्रेती, केकी अधिकारी, दिपिका प्रसाईं, प्रशान्त ताम्राकार, निर्मल शर्मा, केशव भट्टराईको अभिनय रहेको चलचित्रको ‘तिमी रोएको पल’ बोलको गीत निकै चर्चित भएको थियो ।
स्वेता खड्काको लगानीमा बनेको चलचित्र वर्ष कै सफल चलचित्र मानिन्छ । चलचित्रले चर्चा र सफलता दुवै हासिल गर्यो । श्वेता आफैले चलचित्रमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । दयाहाङ राई, नीर शाह, अशान्त शर्मा, अनु शाह, कामेश्वर चौरसिया, प्रज्ज्वल सुजल गिरीलगायतको समेत चलचित्रमा अभिनय रहेको थियो ।
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश अहिराजले प्रदेश नम्बर २ मा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप नगरे अभिशाप हुन
शम्भु यादव सिरहा / शनिबार सिरहामा पोने २ किलो सुन तस्करीमा वडाध्यक्षसहित ६ जनालाई सशस्त्र प्रहरीले पक्रा�
डि.एन. यादबसिरहा / सिरहाको लहान नगरपालिका वडा नम्बर १८ भदैया स्थित खुदिभखारी मन्दिरको वन क्षेत्रमा वर्षैा�
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश अहिराजले प�... ... ...
शम्भु यादव सिरहा / शनिबार सिरहामा पोने २ किलो सुन त... ... ...
डि.एन. यादबसिरहा / सिरहाको लहान नगरपालिका वडा नम्ब�... ... ...
जनकपुरधाम / आईतबार प्रदेश नं. २ मा भएको सचिव उपर मन्... ... ...